Si dhakhso leh oo qoto dheer wax uga baro howlaha ugu muhiimsan ee Binance
Hadaad danaynayso Bitcoin, Ethereum, Doge iyo hanti kale oo dijitaal ah, ma seegi kartid Binance : tirada 1 madal loogu talagalay cryptomonnaie.
Waa barxadda ugu dhammaystiran ee bixisa astaamo fara badan iyo tirada ugu badan ee loo yaqaan 'cryptocurrencies', taas oo ka dhigaysa mid soo jiidasho leh, laakiin sidoo kale adag.
Halkan waxaan ku arki doonaa dhammaan astaamaha ugu muhiimsan ee aad u baahan doonto si aad u bilowdo adeegsiga barta iibsadaan, sale et ganacsade cryptocurrencies.
Koorsadan 100% BILAASH wuxuu ka kooban yahay 9 casharro fiidiyoow ah.
On barnaamijka koorsadan Crypto: bilaabida Binance :
Soo iibso cryptocurrencies
Binance Visa Visa Bilaash ah
Iibi oo ka iibso sheybaarkaaga
Fadlan ogow, koorsadani kuma jirto talo maalgashi. Suuqa loo yaqaan 'cryptocurrency' ayaa noqon kara mid faa iido badan leh, laakiin sidoo kale mararka qaar khatar ayuu noqon karaa. U adeegso madal si taxaddar leh oo ha ku maalgelin lacagta aad ugu baahan tahay inaad ku noolaato ...
Crypto: bilaabida Binance Oktoobar 15th, 2021Tranquillus
READ Mashruuca kala-guurka xirfadeed - Isbadalka Xirfadeed ee CPF
horeKa iibso dhirtaada ugu horreysa Coinbase
socdaKu kobci meheraddaada isbeddel dijitaal ah
14| Warbixin ma la soo saaray dhamaadka tijaabada la kormeeray?